Palitao volon'ondry polar
Hoody palitao vozona boribory
T-shirt boribory T
Manaiky ny volavolan'ny mpanjifa sy ny lamba ve ianao?
Eny, ny habe sy ny loko samy izy dia afaka manao ny fangatahan'ny mpanjifa, ny logo manokana sy ny anarana tsirairay, ny isa azo ampiana arak'izay ilain'izy ireo. Ireo mpamorona matihanina anay dia hanome ny vahaolana tsara indrindra ho anao.
Ahoana no hifehezana ny kalitao?
Ny kalitao no laharam-pahamehana. Ny lamaody dia manome lanja lehibe ny fifehezana kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany. Ny orinasanay dia nametraka ny departmant QC hanamarina ny kalitao tsirairay isaky ny dingana.
Voninahitra ho anay ny manolotra santionany ho anao.
1), Raha manana ny santionany amin'ny tahiry izahay dia hanome anao izahay, omenao anay fotsiny ny Express A / C No.
2), raha tsy manana izany amin'ny tahiry izahay, dia hataonay ho anao izany, avy eo tokony handoa ny sarany santionany sy ny entana ianao, na izany aza, ny sarany santionany dia hamerina aminao amin'ny baiko manaraka.
Rahoviana aho no afaka mahazo ireo santionany na vokatra?
1) Ho an'ny santionany: Amin'ny ankapobeny ny santionany dia maharitra 7-10 andro hamokarana aorian'ny fanamafisana ny endrika.
2) Ho an'ny baiko lehibe: aorian'ny voamarina ny baiko dia halefa any amin'ny orinasa izy ireo ary handamina daty famokarana manomboka ny habetsahanao. Raha vao voamarina ny daty, manodidina ny 30 andro fiasana ho an'ny famokarana. ny dingana tsirairay dia hasehonay anao ny sary sy ny fizotry ny vokatra.
Inona ny fepetra fandoavam-bola azonao ekena?
Manaiky ny L / C isika eo imasony, ny T / T na ny Western Union.
Address:Vohitra Hufang, tanàna Nancahng, faritanin'i Jiangxi, Sina
Blank Hoodie, Hoodies Unisex, Plain Hoodie, Fleece Hoodie, Fanontana hoodie manokana, Custom Hoodie,
Alefaso amin'ny varotra2
Alefaso amin'ny varotra3
Alefaso amin'ny varotra5
Alefaso any amin'ny varotra6
Alefaso amin'ny varotra7